Honor V30 iyo V30 Pro laguma qiimeyn doono DxOMark | Androidsis
Kadib munaasabaddii daahfurka ee Taxanaha sharafta V30 shalay ayuu dhammaaday, madaxweynaha shirkadda, Zhao Ming, ayaa ka hadlay mowduuca qiimeynta kamaradda DxOMark wareysi uu siiyay warbaahinta.
Huawei waxay sidoo kale la wadaagtay warar kale oo hore DxOMark. Markii uu bilaabay taxanaha Mate 20, ayuu yiri taas umay shaacin dhibcaha ay keeneen diiwaanka bartilmaameedka maxaa yeelay aad buu u sarreeyay. Tani waxay la xiriiri kartaa qanacsanaanta shirkadda iyo daacadnimada, marka lagu daro, marka la xaqiijinayo natiijooyinka ugu dambeeya ee DxOMark ay ka muuqato warbixinnadeeda.
Mawduuca 'Honor V30', Zhao Ming wuxuu yiri kuwan soo socda:
“Ugu dambeynti, waxay sameeyaan ganacsi dhameystiran maxaa yeelay DxOMark wuxuu leeyahay heerar qibrad leh, qaar ka mid ahna ay ku saleysan yihiin qalab. Maaddaama qeexitaankan qalabka ah uu sii kordhayo iyo ka sii sareeya, wuxuu siinayaa qiimeyn noocaas ah. Marka waxaan leenahay codad kala geddisan mustaqbalka, sidaa darteed taxanaheena sharafta leh ee V weligood kamaqeyb qaadan doonaan dhibcaha DxOMark markale […] Sannad kasta waxaan markii hore qorsheyneynay inaan kaqeybqaadano dhibcaha DXoMark Qaar ka mid ah heerarka dhibcaha ee DXO waxtar uma leh kamaradaha badan ee taleefannada Sharafta leh, laakiin waxaan u maleyneynaa inay muhiim u yihiin macaamiisha. Marka la eego isku dhaca noocan oo kale ah, waxaan dhamaanteen qiimeyneynaa gudaha in taxanaha Honor 30 lagu tijaabiyo barnaamijkooda.
Waa la arki doonaa in aakhirka kuwan kalsooni mari gacmaha DxOMark ama maya. Hada, ogow in labada taleefan ay wadaagaan kamarad gadaal gadaal ah oo isku mid ah (8 MP oo leh f / 2.4 iyo 3x optical zoom). Waxyaabaha ayaa isbedelaya markaan diirada saarno labada dareemayaal ee kale ee kujira qeybta sawirka gadaal. Ugu horreyntii, toogtaha ugu weyn ee Sharafta V30 waa 600 MP Sony IMX40 oo leh f / 1.8, halka Honor V30 Pro uu la mid yahay, laakiin leh f / 1.6 aperture. Dhanka kale, muraayadaha balaaran ee hore waa 8 MP halka kan labaadna uu yahay 12 MP. Kaamirada is-qaadista laba-geesoodka ah ee labadaba waa isku mid: 32 MP + 8 MP.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kaamirooyinka Honor V30 iyo V30 Pro cusub laguma qiimeyn doono DxOMark